साइबर चौतारी: गुगल को सहयोग विकीपेडीयालाई
यसलाई सँयोग नै मान्नु पर्ला । एक अर्कामा प्रतिद्वन्दी झै गरी प्रश्तुत भईरहेको गुगल ले विकिपेडिया फाउन्डेशनलाई यस पालीको भ्यालेन्टाईन डे को सेरोफेरोमा नै विस लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएछ । विकीपेडियाको प्रशिद्दी वाट प्रभावित भएर नै गुगल ले पनि विकिपेडिया जस्तै साईट Google Knol. सञ्चालन गरेको थियो । तर प्रयोगकर्ताहरुल‍े खासै यसलाई रुचाएको पाईएन बरु विकिपेडियाको प्रयोगकर्ताको ग्राफ उकालो लागेको लाग्यै भयो ।
गुगलको यो सहयोगले विकिपेडिया र गुगल एउटै कोठामा बाजा बजाउन चाहन्छन भन्ने बुझ्दा फरक पर्दैन र ईन्टरनेट दुनियाँका यि दुई माहारथीहरुको बाजा वाट निश्कने धुन पक्कै पनि प्रयोगकर्ताहरुको लागी उपयोगी (श्रवणीय) हुनेछ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । हेरौ गुगलको यस कदमलाई माईक्रोसफ्ट र एडोबले कसरी लिनेछन र उनिहरुको नयाँ रणनिती के हुनेछ ।
Prabesh Saturday, February 20, 2010 at 6:37:00 PM GMT+5:45
गुगलले खाने भो सबैलाई !!!!!